KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
“Nea wohia biara ka kyerɛ me; mɛyɛ ama wo.” Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛka saa asɛm yi akyerɛ obi a ɔnyɛ w’adamfo anaa wonnim no baabiara. Nanso w’adamfo a wopɛ n’asɛm deɛ, ɛnyɛ den koraa sɛ wobɛka saa akyerɛ no. Nnamfo pa yi wɔn yam yɛ wɔn nnamfo apɛdeɛ ma wɔn.
Bible ma yɛhu sɛ, nneɛma a ɛbɛma Yehowa asomfoɔ ani agye no, ɛno na ɔyɛ ma wɔn. Ɛho nhwɛsoɔ ne asɛm a Ɔhene Dawid a ɔne Onyankopɔn faa adamfoɔ no kae no. Ɔkaa sɛ: “Nneɛma pii na woayɛ ama yɛn, O Yehowa me Nyankopɔn, w’anwanwadwuma ne w’adwene . . . Ɛdɔɔso sene deɛ mɛtumi akan.” (Dwom 40:5) Yehowa yam yɛ araa ma wɔn a wɔnsom no mpo, ‘ɔde aduane ne abotɔyam hyɛ wɔn akoma mã.’—Asomafoɔ Nnwuma 14:17.
Sɛ yɛdɔ obi na yɛbu no a, yɛyi yɛn yam yɛ nea ɔpɛ ma no
Sɛnea Yehowa yɛ nneɛma ma afoforɔ ani gye no, saa ara na ɔno nso hwɛ kwan sɛ ne nnamfo bɛyɛ nneɛma a ɛbɛma ‘ne koma atɔ ne yam.’ (Mmebusɛm 27:11) Ɛnneɛ ɛdeɛn paa na wobɛtumi ayɛ ama Onyankopɔn ani agye? Bible ka sɛ: “Mommma mo werɛ mmfiri papayɛ ne nneɛma a mo ne afoforɔ bɛkyɛ, ɛfiri sɛ afɔrebɔ a ɛtete saa no sɔ Onyankopɔn ani.” (Hebrifoɔ 13:16) Nanso, papa a yɛbɛyɛ nkurɔfoɔ ne nneɛma a yɛne afoforɔ bɛkyɛ nko ara na ɛkyerɛ sɛ yɛreyɛ Yehowa apɛdeɛ anaa?
Bible ka sɛ, “Gyidie nni hɔ a, obi ntumi nsɔ Onyankopɔn ani.” (Hebrifoɔ 11:6) Abraham sei, “[ɔgyee] Yehowa diiɛ, na wɔbuu no tenenee maa no, na wɔbɛfrɛɛ no ‘Yehowa adamfo.’” (Yakobo 2:23) Yesu Kristo sii so dua sɛ, sɛ Onyankopɔn bɛhyira yɛn a, gye sɛ yɛnya “Onyankopɔn mu gyidie.” (Yohane 14:1) Ɛnneɛ gyidie a Onyankopɔn pɛ sɛ ne nnamfo nya no, wobɛyɛ dɛn anya bi? Fi aseɛ sua n’Asɛm Bible daa. Woyɛ saa a, ɛbɛma woanya “ne pɛ ho nokorɛ nimdeɛ,” na ɛbɛma woahu nea “ɛsɔ n’ani koraa.” Afei, bere a wokɔ so sua Yehowa ho nokorɛ nimdeɛ na wode nea wosua no yɛ adwuma no, ɛbɛma ne mu gyidie a wowɔ no ayɛ kɛse, na wo ne n’adamfofa no nso mu bɛyɛ den.—Kolosefoɔ 1:9, 10.
Dɛn na Ɛkyɛn Wei?
Nneɛma mmiɛnsa a ɛbɛtumi ama woafa Onyankopɔn adamfoɔ.